भाेलिदेखि बुधले गाेचर परिवर्तन गर्दै, के प्रभाव पर्छ तपाइकाे राशिमा? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं । ज्याेतिषशास्त्रमा ग्रहहरुकाे गति र स्थान परिवर्तनले विशेष महत्त्व राख्दछ।
भाेली भदाै ९ गते बुध आफ्नाे मित्र सिंह राशीमा प्रवेश गर्दैछन् । बुधलाई ज्याेतिषशास्त्रमा राजकुमारकाे पदवि दिईएकाे छ ।
वर्तमानमा अवस्थामा सुर्य सिंह राशिमा अवस्थित छन् । बुध गाेचरकाे कारण सिंह राशिमा बुधातिद्य याेग काे निर्माण हुनेछ ।
के प्रभाव पर्छ त ?
मेष राशिका मानिसलाई बुध गाेचरका अनुसार मानसिक तनावकाे कारण कष्ट हुन सक्छ । काममा असफलता पाउन सक्छ । जीवनसाथी र सन्तानसँग विवादकाे याेग छ । प्रेम सम्बन्ध पनि असफल हुने देखिन्छ । याे हटाउन बिहान बिहान आफ्ना पितृलाई स्मरण गरि गरिबलाई बस्तु दान गर्नु फलदायी हुनसक्ला ।
वृष राशि भएका जातकलाई बुध गाेचरका अनुसार आमालाई सुख पाउने देखिन्छ । धन लाभ हुने छ । वाहन सुख प्राप्त हुने देखिन्छ । सम्पत्ति लाभ हुने र पारिवारिक सुख प्राप्त हाेला । सहयाेग पाईनेछ ।
याे पनि पढ्नुस आज - ०८ साउन २०७६ बुधवारको राशिफल
३. मिथुन: मिथुन राशिवाला जातकलाई याे याेगका कारण साहस पराक्रममा कमी महसुस हुनेछ । धन हानी हुने याेग छ । बन्धु बान्धवसंग विवाद हुनेछ । विद्यार्थी वर्गलाई परिश्रम अधिक गर्नुपर्ने छ । बिहान बिहान उँ काे उच्चारणसहित ध्यान गर्नुहाेला ।
याे राशिका लागि गाेचरका कारण धन लाभ हुने देखिन्छ । वाणी बाेलिमा आधारित काममा विशेष लाभ हुनेछ । विद्यार्थी वर्गलाइ सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ । सम्बन्धिहरुबाट लाभ हुने देखिन्छ ।
सिंह राशिमा बुधकाे आगमनले धनहानिकाे याेग छ, कटु शब्दका कारण विवाद हुनेछ । नाता सम्बन्धिहरुलाई हानी पुग्नेछ । बन्धनकाे भय हुने छ । बृद्धबृद्धालाई खाना खुवाउनुस
कन्या राशिका लागि पनि त्यति राम्राे देखिन्न । सुखमा कमी हुन्, धन हानी हुने याेग छ । असफलता देखिन्छ । नातेदारसँग विवाद हाेला । शत्रु सक्रिय हुनेछन् । विद्यार्थीका लागि त्यति उत्तम देखिन्न । कुनै विद्यालय या सामाजिक क्षेत्रमा दान गर्नुस ।
तुला राशिका लागि उत्तम समय छ । बुध गाेचरका अनुसार शुभ कार्यमा रुचि बढनेछ । धन लाभ हुने छ । स्वास्थ्य उत्तम रहनेछ । सन्तान सुख प्राप्त हुनेछ । विद्यार्थी वर्गलाई विशेष लाभ छ।
याे राशिका जातकलाई नयाँ पद प्राप्त हुने देखिन्छ । शत्रुमा विजय प्राप्त हुनेछ । व्यवसायमा लाभ पाईनेछ । मानसिक शान्त र सुख पाईनेछ ।
याे राशिका मानिसलाई न्हुध गाेचरका अनुसार काममा विघ्न आउने देखिन्छ । यात्रामा कष्ट रहनेछ । नातेदारसँग विवाद वैमनष्य देखिन्छ । धार्मिक काममा अरुचि हाेला । मन्दिर गएर फुल चढाई ध्यान गर्नुस
मकर राशिलाई बुध गाेचर अनुसार धन लाभ हुनेछ । शत्रु परास्त हुनेछन् । मन प्रसन्न रहनेछ । पारिवारिक सुखकाे प्राप्ति हुनेछ । स्वजनहरुबाट लाभ पाईनेछ । शिक्षामा सफलता र प्रतियोगितामा पनि सफलताकाे याेग छ।
११. याे राशिका जातकलाई बुध गाेचरका अनुसार, जीवनसाथिसंग विवाद हुने देखिन्छ । मित्र र नातागाेतासँग सम्बन्धमा कटुता हुनेछ । व्यवसायमा धनहानीकाे याेग छ । मानसिक चिन्ता रहनेछ । कुनै विधवा महिलालाई सहयाेग गर्नुस् । यसले दाेष काट्न सक्छ ।
मीन राशिका लागि राम्रो छ । धर्मशास्त्रमा रुचि बढनेछ । आर्थिक लाभ हुने छ । शत्रुहरुमाथि विजय पाईनेछ । मानसिक सुख मिल्ने याेग देखिन्छ ।